ZCS-series အနိမျ့နှင်းပွိုင့်လက်အိတ်သေတ္တာ Dehumidifiers - တရုတ်ဟန်ကျိုး DryAir ကုသမှု
Turn-key ကိုအပူပိုင်း ROOM တွင် System ကို
VOC abatement စနစ်က
R & D ရေးအဖွဲ့
ZCS-series အနိမျ့နှင်းပွိုင့်လက်အိတ်သေတ္တာ Dehumidifiers
ZCR စီးရီးကာလဖြစ်ပါသည် Dehumidifier
ZCM စီးရီးကာလဖြစ်ပါသည် dehumidifiers
ZCLY-series လေး-ရာသီ Dehumidifiers
DRYAIR ZCS-series အနိမျ့နှင်းပွိုင့်လက်အိတ်သေတ္တာ Dehumidifiers: DRYAIR ZCS-စီးရီး dehumidifiers အလွန်နိမ့်ကျသောနှင်းရည်မှတ်နှင့်အတူအပူပိုင်းသေတ္တာနှင့်လက်အိတ်သေတ္တာများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပါသည် (-50C) ပြည်တွင်းရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်လေကြောင်းပို့ဆောင် -60 စင်တီဂရိတ်သို့မဟုတ် 65 စင်တီဂရိတ်တစ်ခုမှာကဲ့သို့အနိမ့်နိုင်ပါတယ် ဒီကာလဖြစ်ပါသည်လေမှုတ်စက်၏သော့အစိတ်အပိုင်းများ applications များဟာအလွန်နိမ့်ကျသောနှင်းရည်မှတ်ပတ်ဝန်းကျင်အဘို့ပဌနာသည့်အခါစံပြဖြစ်သည့်မော်လီကျူး-ဆန်ခါရဟတ်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်စဉ်ကိုလေကြောင်းခွောကျသှေ့နှင့် / သို့မဟုတ်နေပူသောအခါဤအရည်အသွေးမြင့်ရဟတ်ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်; သို့မဟုတ်အခါ environmen ...
FOB စျေး: အမေရိကန် $ 0.01Million - 0.2Million / Piece
Min.Order အရေအတွက်: 1 Piece
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: တစ်လလျှင် 100 ဦး Piece / ပိုငျးပိုငျး
ဆိပ်ကမ်း: Ningbo သို့မဟုတ်ရှန်ဟိုင်း
DRYAIR ZCS-series အနိမျ့ နှင်းပွိုင့် လက်အိတ်သေတ္တာ Dehumidifiers : DRYAIR ZCS-စီးရီး dehumidifiers အလွန်နိမ့်ကျသောနှင်းရည်မှတ်နှင့်အတူအပူပိုင်းသေတ္တာနှင့်လက်အိတ်သေတ္တာများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပါသည် (- 50C) ပြည်တွင်းရေးလိုအပ်ချက် များနှင့် လေကြောင်းပို့ဆောင် -60 စင်တီဂရိတ်သို့မဟုတ် 65 စင်တီဂရိတ်သကဲ့သို့အနိမ့်နိုင်ပါတယ်
ဒီကာလဖြစ်ပါသည်လေမှုတ်စက်၏သော့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ applications များဟာအလွန်နိမ့်ကျသောနှင်းရည်မှတ်ပတ်ဝန်းကျင်အဘို့ပဌနာသည့်အခါစံပြဖြစ်သည့်မော်လီကျူး-ဆန်ခါရဟတ်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်စဉ်ကိုလေကြောင်းခွောကျသှေ့နှင့် / သို့မဟုတ်နေပူသောအခါဤအရည်အသွေးမြင့်ရဟတ်ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်; သို့မဟုတ်အခါပတ်ဝန်းကျင် alkaline များဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရဟတ်ဖြစ်နိုင်သောနိမ့်နှင်းအချက်ဖြစ်စဉ်ကို Airflow စေသည့် 1st လုပ်ငန်းစဉ်ကဏ္ဍက, 2nd Process ကိုဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းကဏ္ဍများနှင့် reactivity ကဏ္ဍပါဝင်သောသုံးကဏ္ဍများကိုခွဲခြားသည်။ အဆိုပါယူနစ်အရှိဆုံးအဆင့်မြင့် dehumidification နည်းပညာအသုံးချနှင့်လီသီယမ်ဘက်ထရီလက်အိတ်တစ်ခု Ultra-အနိမ့်ကျသောနှင်းရည်မှတ်ပြည်တွင်းရေးပတ်ဝန်းကျင်လိုအပ်သည့်သေတ္တာ, ဒါမှမဟုတ်တင်းကျပ်တဲ့စိုထိုင်းဆလိုအပ်ချက်များနှင့်အခြားအခြေအနေများများအတွက်ကောင်းစွာသင့်လျော်သည်။
1. programmer controller ကို။ လူ့-ကွန်ပျူတာ interface ကိုအလွယ်တကူစစ်ဆင်ရေး။
ထိရောက်စစ်ဆင်ရေးအများကြီးပိုလုံခြုံနှင့်စွမ်းအင်ကိုတိကျမှန်ကန် reactivity အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်ဘို့ထိုသို့ 2. Optional အချိုးပေါင်းစည်းရေး Differentiation controller ကို။
3. ပုံမှန်လည်ပတ်နှင့်အချိန်နှောင့်နှေးကာကွယ်မှု function ကိုအလွန်စက်ရဲ့သက်တမ်းပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။
စွမ်းအင်ချွေတာသောအရာ 4. တိကျမှန်ကန်သောအစိုဓာတ်ကိုထိန်းချုပ်။
5. programmer ကွန်ပျူတာ controller ကိုတစ်ခုချင်းစီကိုပြည်နယ် parameter သည်ဖော်ပြရန်နဲ့ automatic ရောဂါ function ကိုရှိပါတယ်နိုင်ပါတယ်။
6. ပွနျလညျ Airflow နှင့်ဖြစ်စဉ်ကို Airflow သည့်ကာလဖြစ်ပါသည်ရဟတ်၏ဝန်ဆောင်မှုအသက်ကိုစောင့်, filter ကို device ကိုမှတဆင့်လာကြ၏။
Applications ကို: (1)
လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေ -no အားလုံးပြန်လာလေကြောင်း (ထိုအခြေအနေမျိုးအောက်၌လက်အိတ် box ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးအကြောင်းအရာမျှမရှိကြောင်း)
အရွယ်အစား (L ကို * W * H ကို) မီလီမီတာ
* 1600 900 * 600
* 700 * 1700 1400
* 900 * 1950 1600
အားလုံးလတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေပါ (လက်အိတ် box ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးအကြောင်းအရာလည်းမရှိ)
* 600 * 1600 2000
* 700 * 1800 2400
* 900 * 2050 2800
ယခင်: ZCR စီးရီးကာလဖြစ်ပါသည် Dehumidifier
နောက်တစ်ခု: DJDD Seriries မျက်နှာကျက် dehumidifier တပ်ဆင်ထား
Big ဘီးကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Dehumidifier
Big ဘီး Dehumidifier
Big ဘီးစက်မှု Dehumidifier
လက်ကိုင်အတူ Dehumidifier စက်မှု
Mini ကို Dehumidifier
silica gel ကာလဖြစ်ပါသည် Dehumidifier
ZCH-series အနိမျ့နှင်းပွိုင့်ကာလဖြစ်ပါသည် Dehumidifiers
ZCJ စီးရီးကို Compact ကာလဖြစ်ပါသည် Dehumidifier
ZC စီးရီးကာလဖြစ်ပါသည် dehumidifiers
အမှတ် 2088 Keji လမ်းမကြီး Qingshan စက်မှုပန်းခြံ Linan / ဟန်ကျိုး / Zhejiang ခရိုင်တရုတ်
Huzhou အတွက် Microvast, Inc တရုတ် Facility ...
Saft ဘက်ထရီ, တရုတ်
dow ဓာတု (တရုတ်) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ ...